Tababare Quique Setién oo ka hadlay guuldarradii kooxdiisa Barcelona kala kulantay Valencia – Gool FM
Dajiye January 25, 2020
(Barcelona) 25 Jan 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Quique Setién ayaa muujiyay sida uu kaga xun yahay guuldarradii ay kala kulmeen naadiga Valencia.
Valencia ayaa guul ka gaartay kooxda Barcelona oo marti ugu aheyd garoonka Mestalla, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 21-aad horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Haddaba tababare Quique Setién ayaa ciyaarta kaddib wuxuu la hadlay warbaahinta wuxuuna muujiyay sida uu kaga xun yahay guuldarrada ay kala kulmeen Valencia Wuxuuna yiri:
“Qeybtii hore uma aanan abuurin fursado qaabkii loo baahnaa, waxaan helnay 4 ama 5 fursado cad si aan goolal u dhalino”.
“Xaqiiqdii, qaab fiican ma aanan soo bandhigin maanta gaar ahaan qeybta hore ee ciyaarta, ma helin wadada saxda aheyd ee aan ku gaari laheyn goolka kooxda naga soo horjeeday, waxaana jiray waxyaabo aanan si fiican u fahmin”.
“Valencia waxay ka faa’ideysatay qaladaadkii aan sameynay, hadda waa inaan wax saxno oo aan wax walba u qabanaa sida saxda ah, waxaan si taxadar leh u falanqeyn doonnaa ciyaarta waxaanan raadineynaa xalka”.
“Waxaa jira waxyaabo qaar aysan ciyaartoyda si fiican u fahmin, ama aan anaga si fiican wax ugu sharxin”.
“Wixii aan aragnay maanta ma jecleysan, iyagana sidoo kale ma aysan jecleysan”.
“Valencia waxay soo xirtay meelaha banaan, anagana waxaan u baahneyn inaan abuurno fursado badan”.
“Waxaan sameynay xoogaa baasas aan macquul aheyn, mana u shaqeyno inaan sidaas oo kaliya sameyno” ayuu hadalkiisa ku soo xiray tababare Quique Setién.
Macallinka Lille oo ka hadlay mustaqbalka bar-tilmaamedka Man United ee Soumare